रातारात भाइरल भयो अष्ट्रेलिया का*ण्ड!पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला ?? – ताजा समाचार
रातारात भाइरल भयो अष्ट्रेलिया का*ण्ड!पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला ??
Rear view ofacouple sitting on beach with woman leaning head on man's shoulder
पशुपती शर्मा र सम्झना भण्डारीको “अष्ट्रेलिया काण्ड” सार्वजनिक भिडियो सहित)
लोकप्रिय गायक पशुपति शर्मा र गायिका सम्झना भण्डारीको स्वरमा नयाँ तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । नेपाली लोक संगीत पारखीहरुले तीज गीत भनेपछि गायक पशुपति शर्माको नाम सहजै लिने गर्दछन् । गायक शर्माको अरु बर्षझै यो बर्षपनि तीज कोसेली बजारमा आउने क्रम जारी छ । उनी भन्छन्; ‘पहिलाको तुलनामा यो बर्ष कमै तीज गीत गर्छु।’
गायिका सम्झना भण्डारीको पनि तीज गीत बजारमा आउने क्रम जारीनै छ, केही समय अगाडि मात्र “बहिनी नाचिन” बोलको गीत लिएर बजारमा आएकी भण्डारीको यो गीतमा पनि अभिनय स्वर रहेको छ ।
पशुपति शर्माको उत्कृष्ट मौलिक शब्द संयोजन र संगीतमा रहेको यश गीतको भिडियोलाई दुर्गा पौडेलले निर्देशन गरेका हुन्; ‘भने दिपक विष्टको सम्पादन तयार भएको हो । भिडियो भित्र कलाकारहरु दीपाशा बिसी, बबिन ठकुरी सँगै पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारी उत्कृष्ट नृत्य देख्न सकिन्छ । भिडियो हेरौ :